Terabyte tartanka flash drive - dib u eegis loogu flash poplular kaxeeya badan 1GB s
Iyadoo horumarinta ee sayniska iyo farsamada waa in dhalashada dadka helayso ugu fiican oo gobolka ka mid ah goobaha lagu keydiyo tahay qaab ka mid ah warbaahinta dibadda iyo sidoo kale qalabka USB ah in lagu hadda la isticmaalo. Waxaa sidoo kale in la xuso in hugeness xogta waa in la kaydiyo uu u ogolaaday user si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican marka ay timaado saarayaasha iyo waxay ku go'aansadeen in user helo ugu fiican iyo kan gobolka ee xarunta kaydinta tahay . Drives ayaa USB loo isticmaalaa in lagu horumariyo by saarayaasha ee tirada ee 256MB, 512MB, 1GB iyo 2GB Laakiinse kordhinta user ee baahida xaqiijiyey in noocyada iyo tirada aan la dambe loo isticmaalaa sida dalabka wareejinta xogta kacay ee kaamil ah a hab sida ugu dhakhsaha badan technology USB ah ayaa la bilaabay.
4 USB flash caanka ah drives
The drives iyo terminologies la xiriira ay tahay in la sharaxay si user ah si ay ugu fiican iyo technology ugu horumarsan heli. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in qiimaha iyo tusaale ah drive USB waxaa taxadir leh u akhri si noqdaan doorashada fudud sameeyo. Waxa kale oo hubin doona in user helo ugu wanaagsan ee reer waayo-aragnimo USB wax iibsiga oo keeni lahayd in natiijada aadka u wanaagsan:
1. EMTEC - Click USB 16GB 2.0 Flash
EMTEC ayaa lagu yaqaanaa ugu fiican iyo gobolka functionalities tahay ee la xiriirta USB iyo tan multicolor 16GB USB heli karaa drive ayaa gundhig ma aha oo kaliya ee ugu fiican iyo sifaatka aad u sareeya, laakiin waxa uu sidoo kale u xaqiijiso in uu ay taageerayaan inta badan dekedaha USB ah in lagu dhex shaqeeyn lahaayeen nidaamka dunida oo dhan
Sidoo kale waa mid ka mid ah drives ugu fiican oo USB ah 3.0 muujinayaa in shirkaddu ka welwelsan tahay tayada iyo xawaaraha kala iibsiga xogta iyo sabab la mid ah sida ugu fiican ee ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah in arrintan la xiriira.
3. Toshiba - TransMemory ID 16GB USB 3.0 Nooca A
Sidoo kale waa mid ka mid ah farsamooyinka in lagu gundhig by Toshiba si loo hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee shaqada farshaxanka waxaa lagu bixiyaa si user ah in arrintan la xiriira oo ay ka helaan adeegyada ugu fiican. Fasalka ama A nooca muujinaysa in USB waxay bixisaa ugu wanaagsan iyo xal ugu dambeeyey:
USB Cruzer 16GB - 4. SanDisk
SanDisk xaqiiqo ah u baahan yahay Intro ma at dhan sida waxay abuurtaa ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada tahay dadka isticmaala ay hubiyaan in ugu fiican ayaa u dhiibay iyadoo aan wax lacag badan oo USB ee su'aasha ayaa sidoo kale mid ka mid ah tusaalooyin fiican ee arrintan la xiriira ee:
EMTEC - Click USB 16GB 2.0 Flash
Toshiba - TransMemory ID USB 16GB 3.0 Nooca A
Aadka u wanaagsan
USB Cruzer 16GB - SanDisk
Waxa Ayidaya iyo Diidaya drives ku xusan
Hoos waxaa ku qor faa'iidada iyo khasaaraha ka mid ah drives in lagu kor lagu soo sheegay sida ay firmware, design iyo guud ahaan looks:
1. aragti ee drive ee waa cabsi badan oo soo jiidasho leh
2. taageero firmware guud ahaan waa state of farshaxanka
1. interface wuxuu u baahan yahay berito lagu halis ah
2. fiirin guud ayaa sidoo kale la hormariyo dheeraad ah si aad u hesho isticmaala.
1. design ee drive USB waa state of farshaxanka
2. taageero interface guud ahaan waa cabsi iyo gaadhaan xawaare sare.
1. user waa inay aad iyo drives USB la daryeelka sida ay yihiin xasaasi ah
2. xogta overwritten mararka qaar waa arrin soo wajahay.
1. USB ayaa la wado noo guulo ku qabsaday lacagta la rabay ah oo xogta ka dibna u wareejinta.
2. interface USB waa waxa ugu fiican oo ka dhigaysa hubiyo in xogta la wareejiyo hab deg deg ah.
1. design USB wuxuu u baahan yahay maalinimada berito.
2. firmware guud waa in la sameeyaa ka xoog.
1. Waa drive ah oo ay taageerayaan kuwa xoogga SanDisk
2. firmware guud waa xoog badan oo lagu kalsoon yahay
1. interface wuxuu u baahan yahay in la koryeelay
2. user waa in aad u hesho adeegyada ay waafaqsan magaca SanDisk sida ay ugu fiican.
Content Shaxda sharaxaad
Jadwalka kor ku xusan 4 uqaabeeyaan ee xawaaraha Transfer, Geynta, Price, Rating iyo Comments waxaa loo isticmaalaa in qiimeyn ku drives oo aad u hubiso in ay uqaabeeyaan la xiriira ugu muhiimsan ee aan la xukumay oo kaliya laakiin waxaa sidoo kale loo fiiriyo si aad u hubiso in user helo ugu wanaagsan iyo gobolka macluumaad tahay ee la xiriirta ka drives in ka yar tahay wada hadal. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in ay uqaabeeyaan kuwaas waxaa loo tixgeliyaa oo ay sidoo kale codsatay oo kale ah waxaa loo arkaa in waxyaabaha waxayna keeni kartaa go'aanka wax iibsiga waa hubaal fiican. Waxa kale oo hubin doona in user helo natiijada ugu wanaagsan ee la xiriirta drive USB oo uu soo iibsaday ah.
Waxaa mar kale la codsaday oo lagu talinayaa in dadka isticmaala in ugu fiican oo gobolka ka mid ah tahay drives yihiin in la doortay iyo waxa la samayn karaa iyada oo la hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan oo ah heshiis ugu fiican ee wax dib u dhac dheeraad ah oo aan kaliya waxbarasho eraygan tutorial eray. The drives in halkan lagu Fiican oo sidaas daraaddeed iyaga waxaa sidoo kale laga iibsan karaa iyada oo aan wax arrintan iyo dhibaato. User waa in akhri mid kasta oo ton kasta oo daryeel loo sameeyo gabagabeeyo. The user rating iyo qoraaga ayaa sidoo kale ku siin doonaa gacan arrintan la xiriira.
> Resource > Flash Drive > Terabyte tartanka flash drive - dib u eegis loogu flash poplular kaxeeya badan 1GB